IiNdlu ezilishumi elinambini zeenkwenkwezi
Unqulo & Umoya IiNdlu
Iingingqi ezilishumi elinesibini zobomi
Ireyati yokuzalwa yinto enkulu yokupaka i-pizza kunye neetye ezilishumi elinambini. Yaye nganye imele ibinzana kunye namava athile.
Ezi zibizwa ngokuthi izindlu ngeenkwenkwezi. Ziziphi iiplanethi zakho? Uphawu lweZodiac lweplanethi luyakubonisa indlela echazwe ngayo. Ukubeka indlu kwiplanethi, kukubonisa indawo yokuphila apho idlala khona.
Kwi-Astrological Houess, uMninimzi uDane Rudhyar wabiza isatilo sokuzalwa i-mandala, kwaye "uxelela umntu ukuba unokuzifezekisa njani isigqibo sakhe." Kwaye loo ndlu yiplanethi yinkalo yamava apho loo mandla inokuthi ifumene ngokupheleleyo.
Indlu yokuqala: (Indlu yeAries kunye neMars )
Kuquka i-Signing Rising (okanye i-Ascendant) ebaluleke kakhulu, kwaye yinto yokuqala ephawulwayo kwihlabathi. Indlu yesazisi, nantsi izikhokelo kwiiphakethe zethu zangaphandle, kuquka ukuziphatha, izici zenyama, imaski yentlalo, impilo kunye nenhlalakahle. Iiplanethi apha zimelela indlela abanye abakubonayo ngayo, kunye ne "vibe" obeka ngaphandle apho.
Indlu ye sibini: (Indlu yeTaurus neVenus)
Oku kudla ngokuba kubizwa njengemigangatho yemali kunye nexabiso. Lephondo lizinzileyo, ubuchule kunye nokuphucula, inkqubela phambili. Apha uboniswa ukuba ungadalwa njani ubomi obusisiseko, ozinzileyo kwaye uhambelana nemilinganiselo yakho.
Indlu yesithathu: ( Indlu yeGemini kunye neMercury )
Indlu yemfundo, ukuhamba okufutshane, isizwe sentsapho (abantakwabo, abazala, oomama, oomama), ukutshintshana kunye nomnye. Isitayela sokubelana ngemibono yobomi ilapha apha. Yingingqi yezinto zokucoca, kwaye uyithumela ngaphandle kwindawo yakho.
Indlu yesine: (Indlu yeCancer kunye neNyanga)
Inkundla yentsapho, iingcambu zeentaba, ukungenazi nto, uMama, kunye nomoya wakho. Iiplanethi apha zichaphazela indlela ohlala ngayo, kunye namava okufuneka abe nawo kwiziko lasekhaya. Ukuxhamla kwixesha lethu lokuqala kwisibeleko, kwaye nangaphambi koko, kwii-undercurrents zizuze kwimithombo engaphezulu kwelo xesha lobomi.
Indlu yeSihlanu: ( Indlu kaLeo kunye neLanga )
Indlu yobuqili, kunye ne-Self ihamba ngokuzithemba ngaphandle. Yimbutho yobomi benothando ngokudlala, imicimbi yothando, ukuthetha kunye nokubhekiselele kubantwana. Iiplanethi apha zijonge nendlela uYihlo ekubonwayo ngayo, kunye nokuthatha ingozi kunye nokuxhamla kwiindawo ezintsha zokudala.
Indlu yesithandathu: (Indlu yaseVirgo kunye neMercury okanye iKyron)
Indawo yokusebenza rhoqo kwinkonzo enempilo, ezalisekileyo. Ukuzivocavoca, ukutya, umsebenzi wethu wemihla ngemihla, zonke ziwela kule ndawo. Iiplanethi apha zityhila indlela yakho yobomi bemihla ngemihla, uqeqesho, osebenza nabo kunye nokwenyama.
Kwindlu yesithoba: (Indlu yeLibra neVenus)
Le ndlu ibamba izikhokelo kwi-tenor, isitayela kunye nezifundo zobudlelwane bakho obukhulu. Oku kuquka umtshato, ubudlelwano bezoshishino kunye nobuhlobo obukhulu ebomini bakho. Ubudlelwane yi-mirror ye-Self kunye neeplanethi apha zibonise ukuba zeziphi iintlobo zokuzimela ngokwabo kuleso siganeko sobomi.
Indlu yesibhozo: (Indlu yeScorpio kunye nePluto)
Indlu yokuhlengahlengiswa ngesondo, kunye namaxesha okufa nokuzalwa kwakhona. Lo mmandla usebenzisana nazo zonke izinto ezimnyama, ezifihlakeleyo kwaye ezinokubangela ukubhubhisa, kubandakanywa zethu ezingekho phantsi kweengqondo ezingapheliyo.
Iiplanethi apha zichaphazela indlela esinokuhlangabezana ngayo naziwayo-nokuba ngabayika, ukuzama ukulawula okanye ukuzinikela ukuguqulwa.
Indlu yesithoba: ( Indlu yeSagittarius neJupiter )
Inkundla yemfundo ephakamileyo, efuna ulwazi, ukuhamba nokuhlola ihlabathi. Iiplanethi apha zibonisa indlela esinokwandisa ngayo indawo yethu yamava, kwaye sidibanisa konke esikuziyo kwifilosofi yobomi. Lo mkhakha ubonisa iimfuno zombono, amaphupha, iimfuno kunye nendlela esifuna ngayo ubulumko obuphezulu.
Ithelu leshumi: ( Indlu yeCapricorn kunye neSaturn )
Indlu yegunya lomntu kunye neenjongo zamabanga emide. Iiplanethi apha zichaphazela indlela odala utshintsho lwangempela, kwaye ube negunya kwindawo yakho yobugcisa. Inquma izinto ezifana nokuphikelela nokunyamezela kwiinjongo zakho ezinkulu.
Indlu yeshumi elinanye: (Indlu ka-Aquarius no-Uranus)
Indlu yobuhlobo, amanxibelelwano kunye nemigudu ehlangeneyo.
Iiplanethi apha zibonisa ukuba zeziphi iintlobo zobudibaniso ozenzayo ngokusekelwe kwiingathemba ezabelwana ngazo, amaphupha kunye nemibono yekamva.
Indlu yesibini: (Indlu yePisces neNeptune)
Le ndlu isebenzisana nezinto ezifihlakeleyo, kwaye iiplanethi apha zikhuselekile ekukhohlisweni. Ebizwa ngokuthi "indlu yokucima," kuba amaplanethi afakwe apha aya kubhaptizwa kuzo zonke, kwaye kunzima ukubona ngokucacileyo. Ukukhula kule ndlu kwenzeka kwinqanaba lomphefumlo, kwaye kaninzi luphantsi kwe-radar.
Indlu yesithandathu - iiNdlu zeenkwenkwezi
Jupiter kwiNdlu yokuqala (okanye iAries)
Saturn kwiNdlu yesithandathu
Indlu yesihlanu - iiNdlu zeenkwenkwezi
Saturn kwiNdlu yesibhozo
Saturn kwiNdlu Elishumi elinanye
Saturn kwiNdlu yeXhumi
Jupiter eLeo (okanye kwiNdlu yesihlanu)
Ithenda leNine (iNyanga)
Indlela yokubhala nokufometha i-MBA Essay
I-Croning Ceremony Ukubhiyozela Ubulumko Bowesifazane
Izipho eziphambili zezobuGcisa Iingcamango zeengcali: Xa imali ayikho into
Mirabai (Mira Bai), uBhakti oyiNgcwele kunye nePhothi
IEP Iinjongo zeMathematika zokuSebenza kumaBanga aPrayimari
UMary Dyer, u-Quaker Martyr kwiColonial Massachusetts
I-Second Quantum Number Inkcazo
Ukuqonda ukuthetha okudibanisayo
Iimpawu ze-Spooky ezidibana neNdlu yakho
Indlela yokuqala iSemester entsha
4 Iingenelelo zeZikolo zobungqingili
Indlela i-NFL ehlelwe ngayo
Uvavanyo lwe-Titration lwe-Homemade Biodiesel
UJanet Jackson wama-20 aphezulu kakhulu
Imfazwe Yeminyaka Engamashumi Amathathu: Albrecht von Wallenstein
Iimviwo zeBakala leBakala lokuqala: Ukuxelela ixesha nge-5 imizuzu
I-Funniest Memes Ukuphendula ku-Chris Christie's Awkward Super Super Face
UJames K. Polk: Iinkcukacha ezibalulekileyo kunye ne-Biography efutshane